Silahle ithemba isaguga singakhelwa umuzi | News24
Silahle ithemba isaguga singakhelwa umuzi
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Leli ikhaya lesaguga uGrace Mkhize (78) osehlale kulo iminyaka phansi kwesimo esibi, ikakhulukazi uma kunesimo sezimvula ezinamandla.
UKUFAKA isicelo sokwakhelwa umuzi kodwa singaphumeleli kwesaguga seseWillowfontain sekulahlise ithemba lokuthi ngelinye ilanga naso soke sithole umuzi woxhaso lukahulumeni osesimeni esihle.
Isaguga uNkk Grace Mkhize (78) ohlala nabazukulu nabazukulwane bakhe abayisithupha abayizintandane uthi waqala ukufaka isicelo sokwakhelwa umuzi ngo-2008 nalapho kungazange kube nampendulo ngalesi sicelo. Ngo 2010 lesi saguga saphinda futhi safaka isicelo nokwaphinde futhi kwaba okufanayo kwangaphendula muntu.
Silandisa i-Echo sithe sekuphele iminyaka sidonsa kanzima endlini yodaka esihlala kuyo ebanikeza izinkinga, ikakhulukazi ehlobo ngenxa yezimvula ezishiya konakele kakhulu uma kuke kwaba nemvula enamandla. Indlu yesaguga ingamagumbi amahlanu kanti indlu yokudlela (ikhishi) linamakhabethe awayo. Indlu yonke iphuquka izintuli ngoba ayikhonkiwe nakho lokho osekubadalele izifo. Nendlu yangasese nayo iyashaqisa njengoba bethi bahlala ngecala lapho bezikhulula.
Isaguga lesi esibhekwa abazukulu baso asisakwazi ukuhamba kahle ngenxa yokuguga.
“ Ngalahla ithemba lapho ngifake isicelo sami sokwakhelwa indlu ngonyaka ka 2010. Isimo sempilo asisihle neze kulo mndeni ngoba silala ubuthongo benyoni ngenxa yesimo sendlu esihlala kuyona. Kuba nzima kakhulu ngezikhathi zasehlobo ngoba ilapho sisuke sisabela isimo sezulu esivele sishintshe kube nezimvula. Kuyisifiso sami ukuthi ngithole indlu esesimweni esihle ngoba ngihlala nabantwana abangenamuntu. Bayalidinga ikhaya eliqotho futhi elisesimweni sokungabhidliki noma inini. Sengimdala mina kanti kungangijabulisa nami ukuthi ukwazi ukuthi la bantwana babe nekhaya,” kusho uMkhize.
Ongumzukulu kaMkhize uNksz Nonsikelelo Mnguni (24) uthe isifiso sabo ukuba nekhaya elifudumele bafane neminye imindeni. Lo mndeni uphinde ube yizisulu zokuzunjulelwa umpompi wamanzi egcekeni. Lo mkhuba sewandile kakhulu lapha ezindaweni zaseMgungundlovu. Mayelana nalokhu bathe sekuneminyaka bantshontshelwa umpompi futhi besebenzisa ipayipi elincane abazifakela lona ukuze bakwazi ukuthola amanzi. Ipayipi leli lihlale livuza lokhu osekudale ukuthi igceke lihlale limanzi ngenxa yamanzi angavaleki.
Eqhuba uMnguni uthe okunye okubi kakhulu ukuthi isaguga sidla amaphilisi esifo somfutho wegazi ophezulu (BP).
“ Yingakho kubalulekile ukuthi ugogo athole indlu ngoba usewumuntu ohlala ngokungaphili. Usengaguliswa nayikhona ukuthi isimo sendawo ohlala kuyo asikho esimeni esigculisayo.” kuqhuba umzukulu.
Abahlala kule ndlu nguye uNonsikelelo, Sanelisiwe(20), Ntokozo (9), Zekhethelo (3), Owami(1) no Bandile Mnguni.
Ikhansela lendawo uSibusiso Mkhize uthe uyazi ngendaba yesaguga waphinde waveza ukuthi kuyimanje basezinhlelweni zokumakhela ugogo umuzi. Ungomunuye owaqokwa ukuthi akhelwe ngesikhathi kunembizo kaMengameli uJacob Zuma